#Warar dheerad ah oo laga helayo Qarax ka dhacay magaalada Muqdisho - Get Latest News From Horn of Africa
Fahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax culus oo saaka oo Isniin ah ka dhacay bartamaha magaaladda Muqdisho, ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Goobjooge la hadlay Warsidaha Axadle ayaa xaqiijiyay in labo ruux oo shacab ah ay ku dhaawacmeen qaraxa oo ka dhashay walxo qarxa oo lagu xiray Gaari nooca raaxadda ah, kaasoo qarxay xilli uu marayay Isgoyska Tarabuunka ee degmada Hodon.
Ma cadda wali cida bartilmaameedka qaraxa ahayd, balse booliska dowladda oo goobta gaarey ayaa sheegay inay sameeyeen baaritaan, aan natiijadii kasoo baxday lala wadaagin warbaahinta.
Qaraxyada lagu dhejiyo baabuurta yaryar ayaa kusoo badanayay mudooyinkii dambe magaaladda, kuwaasoo qaarkood mas’uuliyadoodu sheegato kooxda Al-Shabaab, oo mudo 10 sano dagaal kula jirta dowladda iyo AMISOM.
Amniga Caasimadda ayaa ah mid aan la isku haleyn karin, oo xilli walba la filan karo inuu qarax iyo weerar ka dhaco, waxaana Xukuumadda Soomaaliya lagu eedeeyay inay ku fashilantay qorshooyinkii ay u dejisay xasilinta magaaladda.
Qaraxyada gawaarida lagu dhejiyo ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa ay aad ugu soo badanayeen gudaha Magalada Muqdisho,waxaana todobaadkii la soo dhaafay wadada Maka-Almukarama ka dhacay laba qarax oo ahaa kuwa gawaarida lagu dhejiyo.
Ciidamada amaanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday baaritaanka amaanka lagu xaqiijinayo, waxaana haddana dhacayay qaraxyada iyo falalka amni darada ah.
Muqdisho oo ka kooban 17 degmo, islamarkaana ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 3 milyan oo qof ayaa waxaa la degay qaraxyo iyo falal amni darro, oo dilalka ugu badan yihiin.